Ra'isalwasaare Farmaajo "Isdajiya caruurta u taga, niyada kheyr u sheega"(Dhageyso) – SBC
Ra'isalwasaare Farmaajo "Isdajiya caruurta u taga, niyada kheyr u sheega"(Dhageyso)
Ra’isalwasaaraha DFKMG Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa goor dhaweyd si kooban ula hadley dadweynaha magaalada Muqdisho ee maanta sida weyn isugu soo baxay, kuwaasi oo si weyn u dhaliilayey heshiiskii ay wada gaareen madaxweynaha & gudoomiyaha Baarlamanka. Banaanbaxayasha oo dhoobnaa barxada Sayidka ayaa Ra’isalwasaaruhu si kooban ula hadley, ka dib markii ay sheegeen inaanay ka tagi doonin goobta oo ay seexanayaan ilaa caawa, waxaana qaar ka mid ah banaanbaxayaasha hogaamiyeyaashoodu ay sheegeen inaanay war ka maqleyn cid aan aheyn Farmaajo.
Halkan ka dhegeyso khudbada Ra’isalwasaare Farmaajo oo la hadlaya horjoogayaasha banaanbaxayaasha
Dhageyso doodii & hadalkii Ra’isalwasaaraha & Dibadbaxayasha
Juun 9, 2011 at 7:49 pm
Daarood iyo Hawiye Inta Xaalad Abuurka ahayd baa meesha Isugu timi Maxaa Dhib ah? Hadii mudane Farmaajo Xilka ka Tago.Dadkas Waxaan u Malaynayaa in Aan Qalbigoodu Waasac ahayn ee Somali Xalkeda waxa ugu horaya in ay Masuliiyn badan oo xilka Iskood uga Taga arkaan si ay Kalsooni u Gasho oo ay u Gartaan xilku in u dadka ka dhexeyo. Ilaa Madaxda Soomalia ay noqadan kuwo ku Kalson shacabkoda oo Makhayadaha la Fariista oo la shekaystaan sidi Wakhtigi Cabdirashiid Cali Sharmarke
Juun 9, 2011 at 10:38 pm
Asc walal wan idin salamayaa dhamaantiin
waxan ushegi lahaa dadka ubanan baxaya farmaajo inay ubanan baxaan Diintoda iyo dadnimadoda
waxa mudan in Kitaabka Allah aad udoodaan intaad farmajo udodaysaan ama ka dhiidhidaan xasuuqa gaalo madowdu ku hayso shacabka Muslimiinta aad ka mid tihiin wcs
Juun 10, 2011 at 12:01 am
Labada shariif ee midna qaadka gadijiray midna ahaa macalin dhiga maadada Juqraafiga yaa cilmiga siiyay ay dadka ku hogaamiyaan.
Waa nasiib daro in Soomaali ay maanta ayaahooda ka taliyaan dad aan xilkas ahayn oo dantooda eeganaya.
Juun 10, 2011 at 12:05 am
Shariif sakiin muxuu yahay maba yaqaan sida soomaaliga loogu hadlee ma waxaa uu awoodaa in uu caalamka tago oo uu ku hadlo luuqado International ah mise wuxuu mooday in uu meesha qaad Nairobi kaqadaayo..
marka waanba layaabanahay marka uu saamiga somaliya ku yeeshay….ee waxaan kula talin lahaa intii uu san dhicin waqtigii uu sharafta dadka hortooda ku tuuri lahaa in uu iska tago…